အဓိကပါဝါ:90 KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:5000-8000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
feed maker စက်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်,တ ဦး တည်းလက်စွပ်သေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအခြားပြားချပ်ချပ် die အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်. ပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးကြိတ် ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာကြသည်, ဒါပေမယ့်လက်စွပ်လုံးလေးကြိတ်စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်သေဆုံးလျက်ရှိသည်. သို့သော်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကြက်အစာကျွေးလုံးလေးများအဘို့ဖြစ်ကြ၏,ကျွဲနွားကျွေးမွေး,ကြက်ဘဲအစာတောင့်,ဝက်အစာကျွေးတောင့်နှင့်ငါးအစာကျွေးတောင့်တင်း, သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်။ feed ကိုအောင်စက်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားလာပါတယ်. ကြက်၊ ဘဲအစာထုတ်လုပ်သောစက်အများစုသည်ရေနွေးငွေ့ကိုသုံးသည်- ဤသည်သေဆုံးသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုတိုးစေသည်. အချို့သောကျွဲနွားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်တွင်ရောနှောထားသောရောနှောစက်များနှင့်ကြိတ်စက်များပါရှိသည်.
အကြီးစား feed လုပ်စက်စက်အသုံးပြုမှုလက်စွပ်သေ. စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့သတ်မှတ်နိုင်သည်. ဤသည်တိရိစ္ဆာန်အစာအမြောက်အများထုတ်လုပ်လေ့ရှိတယ်. သေးငယ်သောအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များကိုအပြားတစ်လုံးဖြင့်သုံးပြီးလုံးလေးများထဲသို့သယ်ဆောင်သည်, ကြိတ်ဆုံနှင့်မရောရ. ဤကြက်ဘဲအစာကျွေးခြင်းစက်သည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် 500 ရန် 8000 တစ်နာရီလုံးလေး၏ကီလိုဂရမ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ HMK စီးရီးကြက်သားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်စက်မှုကြက်၊. pelletizing ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်သွယ်သည့်ကြက်သားအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှာအများအားဖြင့်သံမဏိများဖြစ်သည်. ကြက်ဘဲအစာထုတ်လုပ်သူစက်ကိုကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးအပေါ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်. HMK-250 နှင့်ကြက်အစာကျွေးသောစက်အမျိုးအစားများသည်နှစ်ဆမော်တာကိုအသုံးပြုသည်, မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို, V- ခါးပတ်ကားမောင်း, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေး, ဆူညံသံ. နောက်ထပ်ဘာလဲ! ဤစီးရီးတွင်သေဆုံးသောအစာကျွေးသည့်တောင့်စက်သည် Danfoss ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်, အစာကျွေးတိကျမှန်ကန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်.
တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးသောစက်တွင်ထည့်ထားသောပလပ်စတစ်ပြားတစ်ချပ်ရှိသည်, အဆိုပါဆွဲလှံတံကိုထိန်းချုပ်သည်, ကသေတ္တာသေတ္တာအိတ်ထဲကိုဖြတ်သန်းမတိုက်ရိုက် pelletizing စနစ်ထဲကမှားလိုက်ဖက်ပစ္စည်းထုတ်ပေးနိုင်သည်.
လုံးလေးများအများအားဖြင့် 1.5-12mm ဖြစ်ပါတယ်. တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးစီအတွက်သင့်လျော်သောအရွယ်အစား: ၃-၅ မီလီမီတာအစာကျွေးသည်; နွားနှင့်သိုး 6-10mm ကျွေးမွေး၏; 0.4-2mm အစာကျွေးသည်.
ကြက်၊ အစာ၊ ကြက်၊ အစာ၊
အစာကျွေးခြင်းစက်ကိုလည်ပတ်ရန်အထူးသင်တန်းမရှိပါ, အော်ပရေတာသည်စက်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်လက်စွဲကိုလိုက်နာပြီးလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်. ကျွဲနွားကျွေးမွေးရန်, သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးပစ္စည်းအခွအေနေရမည်ဖြစ်သည်. ကုန်ကြမ်းများကိုအမှုန့်ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းပါ, နှင့်အရောအနှောကိုဖန်တီးပါ. ဤသို့ပြုရန်သင်သီးခြားကြိတ်စက်နှင့်ရောနှောစက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ပြီးတာနဲ့သူရောနှောနေသည်, ဤကုန်ကြမ်းများကိုပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစတင်သည့်တိရစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်ထဲသို့ကျွေးသည်. အမှုန့်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ရေနွေးငွေ့နှင့်အတူ, နှင့်လုံးလေးများသို့ချုံ့သည်. အဆိုပါရေနွေးငွေ့ feed ကိုပစ္စည်းထဲမှာဓာတ်ဓာတ် gelatinizes.
ထို့နောက်ထိုအရောအနှောများကိုတွင်းထဲသို့ ဖြတ်၍ အပေါက်ထဲသို့ဖိလိုက်သည်. ၎င်းကို extruded ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်အရောအနှောများကိုလိုချင်သောအရှည်သို့ဖြတ်သည်. အများအားဖြင့်, ချိန်ညှိနိုင်သောဓားသည်သင့်အားလုံးလေးများ၏အရှည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်. ဤရွေ့ကားလုံးလေးများထို့နောက်အအေးဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းကြသည်. ပြီးတာနဲ့လုံးလေးများအခြောက်ပါပြီ, သူတို့ကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်. (အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။)
Pelletizing သည်သင်၏စီးပွားရေးပမာဏမည်မျှပင်ရှိပါစေသင်၏ကျွဲနွားများကိုကျွေးမွေးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. အလွန်အကျွံအမျှင်ပစ္စည်းများအားလုံးလေးများပြုလုပ်သည့်နည်းပညာတွင်အဓိကတိုးတက်မှုများရှိခဲ့သည်. ကြက်အစာကျွေးခြင်းစက်သည်ကြက်မွေးမြူသူမည်သည့်အတွက်မဆိုတန်ဖိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်.